Wararka - GD Albaabka Quful-dhigay
GD Albaabka Quful
GD waxa ay ku siinaysaa quful albaab oo aad u door ah oo dhigaya dhammaan albaabada gurigaaga.Waxa aanu u qaabaynay albaabbadaada laga soo galo, kabaalka albaabka iyo xidhmooyinka albaabbadaada gudaha Albaabadahan qufulka albaabadu waa kuwo tayadoodu aad u sarayso, oo leh hawlo kala duwan, cabbiro, dhamaystir iyo qaabab ku habboon inta badan amniga iyo baahiyaha qurxinta.
GD Door Handle-sets - farshaxannada gacanta ee hore ee Doomaha Gacan-ku-qabsiga waxay qanciyaan dhammaan baahiyaha gelitaanka hore, isku darka ugu dambeeya ee amniga albaabka laga soo galo iyo naqshad quruxsan.
Qalabka kabaalka albaabka GD-ga ayaa bixiya ku habboonaanta iyo raaxada marka albaabka la furayo.Waxaa lagu heli karaa laba gacan oo lever ah oo dhinac ah iyo qufulka, Yale lever hand-sets waa kuwo dhaqaale oo fudud in la xakameeyo.
Qalabka albaabka GD-ga waxaa loogu talagalay qaabab kala duwan si ay u bixiyaan xalal furan oo raaxo leh oo ku habboon gacmahaaga.Albaabadaan albaabadu waa doorasho ku haboon isticmaalayaasha dhaqaalaha, iyagoo bixiya noocyo kala duwan.
Dhimashada GD waa doorashada ugu habboon ee ilaalinta albaabka dhammaystiran.Daboolka dhintaan ayaa si weyn looga marsadaa albaabada hore, oo leh buroyaal furaha ah iyo gacanka kabaalka, laakiin sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa meelo ammaan yar.
Waqtiga boostada: Jun-03-2021